ဆော့ဝဲယား ကမ္ဘာ — Steemit
yuzana (59)in #myanmar •2years ago
အီလက်​ထ​ရောနစ်​ကမ္ဘာလို့​ပြောတဲ့အတိုင်းဘဲဗျ ကမ္ဘာကြီးမှာ အီလက်​ထ​ရောနစ်​ပစ္စည်း​တွေလွှမ်းမိုး​နေတယ်​ ဘယ်​​လောက်​ပင်​ခွန်​အားကြီး​သောရုပ်​ဝထ္ထုဖြစ်​ပါ​စေ အီလက်​ထ​ရောနစ်​နဲ့​တွန်းရင်​မ​ရွေဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး၊ ဒီအီလက်​ထ​ရောနစ်​ပစ္စည်း​တွေကိုလဲ လူ​တွေရဲ့အုံး​နောက်​နဲဖန်​တီးထားတဲ့ ​ဆော့ဝဲတွေနဲ့ထိမ်း​ကျောင်း​မောင်​နှင်​လာ​တော့တာဗျ ၊
​ဆော့ဝဲ​တွေ ဒစ်​ဂျတယ်​အ​ကြောင်း​တွေသိပ်​နားမလည်​ရင်​ အီလက်​ထ​ရောနစ်​ စက်​ပြင်​သမားဖြစ်​လာဖို့​နောက်​မလွယ်​​တော့ပါဘူး ​မော်​​တော်​ကား ဟန်းဖုန်း တီဗွီတို့ကစလို့ ​သေး​သေး​သော​သော အိမ်​သုံးပစ္စည်း​တွေကစ က​လေးကစားစရာ​လေး​တွေကအစ ​ဆောဝဲ (ဖန်းဝဲ) ထည့်​ကြပါပြီ၊​ ဒီပစ္စည်း​တွေမှာအဓိက​ဆော့ဝဲပါဘဲ ၊ ပစ္စည်းကသိပ်​တန်​​ကျေးမရှိပါဘူး ​နောက်​ပိုင်းပြက်​ရင်​ပြန်​ပြင်​ဖို့ ​ဆော့ဝဲကိုဘဲ​ရောင်းစားကြ​တော့တာ​လေ
အတုလုပ်​လို့မရပါဘူး ​ရေးတဲ့သူက​ပေးမှသာလျှင်​ရတာဖြစ်​ပါတယ်​ ၊တ​ဖြေး​ဖြေးနဲ့ကမ္ဘာကြီးက ဒီဂျတယ်​​ဆော့ဝဲကမ္ဘာကြီးဖြစ်​လာနေပြီဖြစ်​တဲ့အ​ကြောင်းတင်​ပြလိုက်​ရပါသည်​၊
#electronic #life #indonesia #electrode
2 years ago in #myanmar by yuzana (59)
Just builtasystem myself but these raspberries do some serious work for their cost
You gota21.61% upvote from @mitsuko courtesy of @yuzana! .
This post has receiveda8.13% upvote from thanks to: @yuzana.
ငှင့်​ ကျွန်​​တော်​က ယုဇနဦးယျာဉ်​ မှာ​နေလို့ ယုဇန လို့နံမယ်​​ပေးမိတာ
You have been defended witha10.53% upvote!
I was summoned by @yuzana.